I-ROI efanelekileyo kwiincwadana ze-imeyile
Kutheni iincwadana ze-imeyile zisebenza ngokufanelekileyo?
Lwesine, Disemba 6, 2012 NgoLwesibini, nge-4 kaDisemba ngo-2012 Douglas Karr
Kutshanje ndibhale eyam Uluhlu lokuthengisa olwenziwa kwi-Intanethi kwaye elinye lamaqhinga aneendawo eziphambili kukuthengisa nge-imeyile. Ukuthengisa nge-imeyile kusenokubuya okuphezulu kakhulu kutyalo-mali, iindleko eziphantsi zokungena, kwaye yenye yezimbalwa ubuchwepheshe bokutyhala ishiye abathengisi ukuba bafikelele kubabhalisi babo bangoku.
Imisebenzi yokuthengisa nge-imeyile- sonke siyayazi loo nto kodwa ingakanani imbalelwano ye-imeyile efanelekileyo kumbutho wakho? Ngaba uyayiqonda into esebenzayo kunye nengasebenziyo kwintengiso ye-imeyile? Ngaba ungayibala eyona nto ibuyayo kutyalo-mali (i-ROI) ukusuka kumkhankaso we-imeyile okanye ixabiso eliyinyani lomrhumeli we-imeyile? Ngaba ukutyala imali kwindlela ethe kratya yokuthengisa ngentengiso kuqhuba ukubandakanyeka okukhulu kunye neengeniso eziphezulu? Ezilandelayo infographic evela kwi-iContact ibonisa indlela yokuqonda ngokwenyani ixabiso loluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile kwaye, ngokulandela ezona ndlela zilungileyo zokuthengisa nge-imeyile, ungalonyusa ixabiso lemikhankaso yakho yokuthengisa nge-imeyile.
tags: email Marketingimbuyekezo yentengiso ye-imeyile kutyalo-maliukuthengisa nge-imeyile i-roiixabiso lokuthengisa nge-imeyileincwadana ye-imeyilenewsletter
Ubuso obutsha boKwenziwa kweeNjini zoKhangelo
I-CodeGuard: Ugcino lweWebhusayithi kuMafu
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2012 ngo-1: 58 AM
NGABA i-93% yabasebenzisi be-intanethi bakhetha ngokwenene i-imeyile yobuqu kuzo zonke iimveliso kunokunxibelelana okunemigangatho emininzi kunxibelelwano lwasentlalweni? Ngaba ayizukuxhomekeka ekubeni 'kufutshane kangakanani ukubandakanyeka.